Ogaden News Agency (ONA) – Kaligi Taliye Males Zenawi oo Lagu Qasbay Innu u jawaabo mudaharadka Jaaliyada Ogaden
Kaligi Taliye Males Zenawi oo Lagu Qasbay Innu u jawaabo mudaharadka Jaaliyada Ogaden
Posted by ONA Admin	/ October 11, 2011
Kaligi Taliye zenawi ayaa waxa lagu qasbay innuu ka jawaabo cabashada dadka banaanbaxyaasha ah ee isasoo hortubay shirki tamarta. Waxa uuna islamarkaas lahadlay Warbaahinta kasoo qeybgashay shirkaas isaga oo ay weydiyeen su’alo ay kamid yihiin xasuuqa uu ka geysto Dhulka Ogadeniya iyo Xabsiga wariyaasha u dhashay wadanka Sweden.
Males Zenawi oo ka cadhooday in lagu qasbo inu lahadlo warbaahinta kana hadlo arrimaha Ogadeniya iyo Xabsiga wariyaasha Sweden ayaa si kulul waxa uu ugu jawaabay Wargeyska Aftenposten: Wadanka Norwey iyo Wadamo kale oo badan ama ururada caalamiga ahiba waxa ay isu maleeyaan inay awood iyo xaq u leeyihiin inay dhexgalaan arrimaha siyasada Afrika. Balse aniga oo ah nin Ethiopian ah xaq uma lihi inaan ka hadlo Siyaasada Norwey. Labawajiilanimada noocas ah waligano ma aqbalayno. Faraha naga qaada hana nasoo dhexgalina siyaasadayada, hadii wadanka Norwey uu nacaawinayo oo dhaqaale nasiinayo waa soo dhaweynayna lakiin amaanka hanoogu dadalaan siyaasadayadana faraha hakalabaxaan waxa saas yiri Zenawi.
Ra’isal wasaraha Ethiopia waxa uu si toos ah u qirtay inuusan ku faraxsaneyn Banaanbaxa Ogadeniya ee ka dhacay Norwey, islamarkaasna inuusan rabin in wadamada Europe ay wax ka su’alaan gumaadka uu ku hayo shacabka somalida Ogadeniya. isaga oo ka hadlaya banaanbaxa boqolaalka qof ee ku dhawaqaya waxaan rabna Xoriyad in lasiiyo Ogadeniya, caruurta aad dilayso jooji waxa Ra isal wasaaraha Ethiopia ku jawaabay sidan:
Hadii dadka Banaanka ku mudaharadaya ay kasoo horjeedaan siyaasadayada ha mudaharadeen. Waxaanse sheegaya inay iska dhamaan doonaan. Waxa isaga oo hanjabaya hadalkiisa uu sii raaciyay waxa aanu kasoo gudubnay waqti qofka ree Ethiopia ah xabada ehelkisa lagu dilo lagu qasbo lacagteda inay bixiyaan. Wadankan aan maamulo waxa kasoo bilaabay zero. Walise wax badan ayaa noo hadhay.
Raisal wasaraha wadanka Ethiopia ee ku caan baxay dilka iyo xasuuqa shacabka somalida Ogadeniya waxa uu rabaa inuu beesha caalamka ka indha saaro xasuuqa hadh-iyo-maalin kuhayo ogadneiya. Meydad-ka aan la aasin ee lagu qasbo in suuqa dhexdisa la soo dhigo si dadka ree ogadeniya loo cabsigaliyo. Waxa uu raba innuu beesha caalamka ka dado Gabdhaha iyo Hooyooyinka ree Ogadeniya ee Ciidamadisu kubsiga u geysteen iyo saqiirka uu gowracayo.
Males Zenawi oo isku dayaya xirfad kasta uu u leeyahay innuu kuqariyo danbiyada ka dhanka ah bani aadamka ee hayadaha xuquuqul insaanku ku qireen ayaa waxa uu ka waramay sababta aan loogu ogoleyn haayadaha caawimada siiya Ethiopia inay gaadhsiyaan gar-gaarka dadka u baanhan. Waxa uuna ku jawabay Zenawi isaga oo indho sareexaadkiisi isticmalaya gabgableynayana. Wadanka Ethiopia waa wadan aan la guumaysan sidaas awgeed hayadaha Gargaarka ee cawamada bixiya looma ogola inay wadankayaga ka shaqeyaan oo horumarinta siyaasadayada ka qeyb qaataan loomana oggola inay kawaraman Xuquuqda Aadamaha ee wadanka Ethiopia.
Males Zenawi waxa kale oo uu ku eedeeyay labada wariye ee u dhashay Sweden ee uu kasoo afduubay Dhulka Ogadeniya inay yihiin Argagaxiso una shaqeynayeen ururo argagaxiso.
Hadalada micnaha aan sameynayn ee uu ku jawaabay Zenawi ayaa u muuqda nin mooskiisi biyo ugusoo galeen. Marna Males Zenawi kuma uusan fikirayn dad somalida Ogadeniya ah oo Banaanka ka mudaharadaya ayaa hotelkaga polis kugu ilaalin islamarkaasna cabashadooda ay kuweydinayaan warbaahinta caalamka iyo Madaxda Dowlada Norwey.
Raisal Wasaraha Norwey ayaa u cadeeyay warbaahinta wadanka Norwey inuu si toos ah ugala hadlay Zenawi maalinimadi isniinta oo uu waxkaweydiyay kalana hadlay Kufsiga iyo dilka loogeysto shacabka somalida Ogadeniya sidoo kale waxa aan kala hadlay ayuu yiri Maxaabiista labada wariye ee u dhashay Sweden ee ku xidhan Ethiopia.
Raisal wasaraha wadanka Norwey ayaa sheegay in Wadanka Norwey uu rabo in Ethiopia kala shaqeeyo sidii ay uga bixi lahaayen saboolnimada. Ganacsiga iyo maalgalinta aan ku sameynayno waxa ay ku xidhantahay arrimaha xuquuqul insaanka.
Haddaba Shacabka ree Ogadeniya ee ku nool Scandenevianka waxa ay ku dadalayaan inay soo saaraan ceebkasta uu leeyahay Zenawi, waxayna wadanka norwey Goobti uu ku sugna Zenawi u jirsadeen faro caaradood sida ay sheegeen warbaahinta wadanka Norwey oo sheegay in Poliska wadanka norwey ay kala dhexgaleen dadki mudaharadayay iyo Zenawi.
aad ayaan ugu faraxsanahay jacda soo gaadhay dhiigyacabka indhaha adag